XISBIGA WADANI MA WAXA UU AAMINSAN YAHAY IN AYNU XEER-JAJAB IYO XAAL-MASTUUR KU SOCONO?.
Thursday October 31, 2019 - 08:01:37 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Cumar Axmed Cali
Xisbiga wadani ma waxa uu dowladnimada u yaqaanaa xeer jajab iyo iska lulasho, mise waxa uu u yaqaanaa shuruucda iyo xeerarka dalku leeyahay oo si waafiya loogu hogaansanaado?.
Xisbiga wadani ma waxa uu aaminsan yahay, in nidaamka garsoor ee wadankeena ka jiraa uu yahay mid u adeega, hadba cidda talada haysa oo qudha, mise waxa uu kaga kalsoon yahay garta odayaynta iyo geedka hoostiisa?
Waxaan uga socdaa, marka aad si taxadir leh u dhuuxdo talaabooyinka iyo ficilada xisbiga wadani qaadayo, waxay kuu iftiiminayaan in aanuu xisbiga wadani marna rabin in shuruucda iyo xeerarka uu dalku leeyahay uu u hogaansanaado, taa badalkeedana uu jeclaan lahaa in aynu ummad ahaan ku socono xeer jajab iyo xaal-mastuur.
Waxa taa daliil u ah, sida uu xisbiga wadani uga gabar-gaalayo in uu tabashooyinka uu qabo u maro dariiq sharci oo uu ku garnaqsado.
Waxaynu ka war-haynaa in uu xisbiga wadani uu si weyn uga biyo diiday najiidadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada ee Somaliland ka qabsoontay 3November 2017, taa soo raadkii ay inagaga tagtay uu wali bulshadeena ka dhex muuqdo.
Waxaana taa loo sibirsaari karaa, kaalintii uu xisbiga wadani iska taagay najiidadii lagu dhawaaqay 21November 2017, taa soo markii uu xisbiga wadani najiidada aqbalayay, uu raaciyay ereyo uurkutaalo iyo caloolxumo ka buuxdo, oo taageerayaashiisa ku abuuray dareen dhiilo xambaarsan iyo wal-wal hor leh, waana halka ay salka ku hayso, kala fogaansha bulshada ka dhex muuqdaa.
Hadaba waxa haboonayd in xisbiga wadani uu laba talaabo mid uun qaato:- waa mida koobaade, in uu siniyad ah u haniyeeyo najiidada ay komishanku ku dhawaaqeen, islamarkaana uu taageerayaashiisa u sheego in ay si waafiya ula shaqeeyaan cidda talada dalka loo doortay, iskana iloobaan xanaftii iyo xajiintii ay doorashadu ku reebtay.
Waa mida labaade, in uu dariiq sharci u maro waxa uu tabanayo, kagana calafqaado guul iyo guuldaroba, shuruucda iyo qawaaniinta uu dalku leeyahay.
Waxa kale oo uu xisbiga wadani deedifeeyay dhex dhexaadnimada gudida doorashooyinka qaranka oo iyagu ah, kuwa doorka ugu weyn ku leh, qabsoomida doorashooyinka ay caqabaduhu daashadeen, sidoo kalena ay mihiim u tahay in ay haystaan kalsoonida dhinacyada ay qusayso.
Hadaba waxay arrimahani hoosta ka calaamadinayaan, shakiga badan oo ku gadaaman xisbiga wadani in uu daacad ka yahay qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo loo dareero, taa soo ay shacabku ku soo xushaan xubnihii ku matali lahaa goleyaasha baarlamaanka iyo deegaanka.
Si kastaba ha ahaatee, xisbiga wadani kalsooni-darada uu ka muujiyay gudida doorashooyinka, marna kuma eegin in uu dariiq sharci u maro xaajadan la guracnaatay, waxa se uu doorbiday in uu gartiisa ku soo dhex-tuuro shacabka oo aan ka garnaqi-karin, arrimaha noocan oo kale ah. Dhinaca kale waxay talaabadaasi qayb ka ahayd, caqabadaha ay doorashadu ka qabsoomi wayday.
Arrinta ugu denbeysa ee aan iyana farta ku fiiqayaa, waa saluugii uu xisbiga wadani ka muujiyay xubnaha uu madaxweynu u soo magacaabay in ay ka mid noqdaan gudida doorashooyinka qaranka, oo uu xisbiga wadani sida fiinta uga qayliyay.
Hadaba waa sax, oo xisbiga wadani wuu saluugi karaan, haddii uu ku qanci-waayo sida ay wax u socdaan, waxa se mihiim ah, in uu xisbiga wadani ku kalsoonaado nidaamka garsoor ee dalka ka jira, maxaayeelay dowladnimadu waxay ka unkantaa, shuruucda iyo qawaaniinta wadanku leeyahay oo lagu kalsoonaado.
Sida aynu ogsoonahay waxaynu dhisanay, nidaam maamul oo ka kooban seddex gole-qaran, oo midiba midka kale waardiyeynayo, (check and balances) si aanuu midna uga gudbin xayndaabka iyo xariiqda shaqo ee uu leeyahay, islamarkaana ay bulshadana gar ku tahay in ay aaminaan.
Hadaba muxuu xisbiga wadani, shuruucda iyo qawaaniinta uu wadanka leeyahay, uga cataalaynayaa, mar hadduu yahay xisbi siyaasiya oo doonaya in uu masiirka ummadda dhabarka u rito?.
Muxuu se cabashadiisu ugu soo dhex tuuraa bulshada dhexdeeda, isaga oo ogsoon in aynaan bulsho ahaan u bislayn, ka garniqidda arimaha siyaasiga ah?.
Ma muranka iyo yooyootanka ayuu xisbiga wadani u arkaa, in ay fure u tahay guushiisa, mise kaalinta mucaaradnimo ayuu xisbiga wadani u yaqaanaa, in aan la aqbalin, wax walba oo xukuumadu wadato?.
Xisbiga wadani ma u kala soocan yihiin, wixii u baahan in indho qarannimo lagu eego iyo wixii u baahan in indho mucaaradnimo lagu eego?.
Gun iyo dabo-gabadii, waxaan hoosta ka xariiqayaan in aynaan horumar ku gaadhaynin dhaqamada noocan oo kale ahi inta ay innagu gadaaman-yihiin, sidoo kalena ay qaylada iyo yooyootanku inoo yihiin dimuqraadiyad hanaqaaday. By cumar AxmedCali:[email protected] gmail.com. tel: 0634244802.